WBM Accountancy Training Center provides CPA, ACCA, Dip IFR, LCCI, DA, ICM, On Job Training related courses on Accounting and Finance.
To provide students with education background to become competence and responsible accounting professionals
To be regionally recognised leader in influencing accounting professional by educating our students
U Win Bo Myint Accountancy Training Center တွင် CPA , ACCA , DipIFR , LCCI, DA, ICM and On Job Training အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
Landon Chamber of Commerce and Industry ( လန်ဒန်စက်မှု့လက်မှု့ ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းချုပ်) ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာ စတင်အခြေစိုပ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် အောင်မြင်ထင်ရှားစွာ ရပ်တည်နေသော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
DA ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ ချီးမြှင့်ပေးအပ်တဲ့ Diploma တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ DA တတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ အပေါဆုံးက အလုပ်အကိုင်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများလှတဲ့ diploma in accounting ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဟာ သာမန်အငယ်တန်းစာရင်းကိုင် တစ်ယောက်ထက် အဆများစွာပိုပါတယ်။
Institute of Commerical Management (ICM) သည် ၁၉၇၉ ခုနစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ် ၄ဝ ရှိ Education Charity တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Institute of Commerical Management (ICM) သည် UK နိုင်ငံတွင် သင်ကြားနေသော Qualifications များ၏ အရည်အသွေးကို စိစစ်၍ Ofqual (UK) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အစိုးရဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1. Trading Company တစ်ခုတွင် စာရင်းကိုင်တစ်ဦး သိသင့်သိထိုက်သော Knowledge Sharing လုပ်ပေးခြင်း
2. Source of document မှစ၍ Financial statement များ အထိ အခြေခံစာရင်းသွင်းပုံ အဆင့်ဆင့်ကို လက်တွေ့သင်ကြားပေးခြင်း
U Win Bo Myint Accountancy Training Center ကို တက်ရောက်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏ စကားသံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
U Win Bo Myint Accountancy Training Center ကို ဆုရရှိခဲ့သော ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအား ဆုများပေးအပ်ခဲ့ပုံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Mg Zaw myo thant
Dip IFR ကို DEC 2018 တွင်ဖြေဆိုပြီး Country First , Worldwide 8th ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူ
Ma Khin Nyein Chan Soe
ACCA Part2F8 ဘာသာရပ်ကို June 2019 တွင် ဖြေဆိုပြီး Country First Worldwide 7th ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူ
U Win Bo Myint Accountancy Training Center တွင် သင်ကြားပြသပေးနေသော အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာ ၊ ဆရာမများကို ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Founder is U Win Bo Myint who has BA (Myanmar), ACCA (Affiliate), CPA, DMA (UK)…
Daw Zar Chin Win Han
Daw Zar Chi Win Han သည် B.Com, CPA , PA ACCA (Affiliate ), DA (UK) ရရှိခဲ့ပြီး PA 1239လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လက်မှတ်ရ …….
U Min Lwin Oo ​ မောင်မျိုးထွဋ်(ရုက္ခ​ဗေဒ)
ဆရာ ဦးမင်းလွင်ဦးသည် B.Sc Hons; ( Botancy) ဘွဲ့ကို ၁၉၈၂-၈၇ တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်…
Daw Win Mya Thuzar
ဆရာမ ဒေါ်ဝင်းမြသူဇာသည် B.C.Sc (Hons) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မိထ္ထီလာ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်….
ယနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Win Bo Myint Accountancy training centre မှ ဖွင့်လှစ်ပေးမည့် LCCI Level3100% Online Class
Covid 19 ကြောင့် သင်တန်းတွေပိတ် အလုပ်တွေပိတ် ဘယ်အချိန် လုပ်ငန်းတွေ ပုံမှန်ပြန်လည် စတင်မလည်း မသိရသေးတဲ့ အ​ခြေအနေမှာ မိမိတို့ရဲ့ပညာရေးကို အထိခိုက်မခံပါနဲ့…
ကျွန်​တော်တို့ အ​နေနဲ့Online Class ဖြင့် သင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်အရပ် ဒေသပဲ ရောက်ရောက် အဆင်ပြေစွာ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
LCCI Level 1 &2Batch-12
Batch (12) 100% online class level 1&2 သင့်အိမ်မက်တွေက စျေးမကြီးတော့ပါ။ 35000 ကျပ်မှ စတင်လေ့လာလိုက်ပါ။
11 th Batch ပြည့်သွားသောကြောင့် (12)Batchဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ Win Bo Myint Accountancy training Centre မှ ဖွင့်လှစ်ပေးမည့် LCCI Level 1&2 Online Class တန်းခွဲသစ် (14/11/2020) Sunday မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
LCCI level 1 &2Batch - 14
ကျွန်တော်တို့ Win Bo Myint Accountancy training Centre မှ ဖွင့်လှစ်ပေးမည့် LCCI Level 1&2 နှင့် On Job Training 100% Online Class တန်းခွဲသစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
စာရင်းပညာလေ့လာပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် LCCI Level 1&2 နှင့် အတူ On Job Training ကိုပါ တွဲ၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်….
Level 1&2 မှာ ဘာတွေ သင်ကြားရမလည်း